Fako Factory | Mpanamboatra fako any Sina, mpamatsy
Miaraka amin'ny O fako afaka miaraka amina pedal 10L LJ-1636
LONGSTAR fitoeram-pako, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Mora ny mampiasa azy, raha vao manitsaka kely ny farany ambany ianao dia hisokatra ny sarony. Amin'ny alàlan'ny faritra malama dia mora ny manadio azy, ary mahazo aina ihany koa.
Fako boribory miaraka amina pedal 4L (S) LJ-1639
Ny fako am-pasana dia misy pedal 12L LJ-1637
Fako manaparitaka minitra (L) CH-6370
LONGSTAR Minions can fash, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Mora ny mampiasa azy, raha vao manitsaka kely ny farany ambany ianao dia hisokatra ny sarony. Amin'ny alàlan'ny faritra malama dia mora ny manadio azy, ary mahazo aina ihany koa. Miaraka amin'ny maodely minion dia toa velona sy mahafinaritra izy.
Fako boribory miaraka amina pedal 6L (L) LJ-1638
Fako manaparitaka minitra (S) CH-6536
LONGSTAR Minions can fash, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Mora ny mampiasa azy, apetraho eo amin'ny fitoeran'ny fitoeram-pako fotsiny ny kitapo fako dia maninona. Amin'ny alàlan'ny faritra malama dia mora ny manadio azy, ary mahazo aina ihany koa. Miaraka amin'ny maodely minion dia toa velona sy mahafinaritra izy.
Fako boribory afaka LJ-1660
LONGSTAR fitoeram-pako, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Mora ny mampiasa azy, apetraho fotsiny amin'ny fitoeran'ny fitoeram-pako ny kitapo fako dia tsara; Miaraka amin'ny fahaiza-manao avo dia tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro.
Tavoahangy fitehirizana minions CH-6537
LONGSTAR Minions bucket fitehirizana birao, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Izy io dia azo nampiasaina ho toy ny basy fitaratra birao, mora ampiasaina izany; Amin'ny alàlan'ny faritra malama dia mora ny manadio azy, ary mahazo aina ihany koa. Miaraka amin'ny maodely minion dia toa velona sy mahafinaritra izy.
Miaraka amina fako D afaka miaraka amina pedal LJ-1672
Miaraka amin'ny O fako afaka miaraka amin'ny dingana pedal LJ-1673
Ny fako afaka amin'ny pedal 8L (L) LJ-1630
LONGSTAR fitoeram-pako, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Mora ny mampiasa azy, raha vao manitsaka kely ny farany ambany ianao dia hisokatra ny sarony. Amin'ny alàlan'ny faritra malama dia mora ny manadio azy, ary mahazo aina ihany koa. Miaraka amin'ny fahaiza-manao lehibe dia tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro izy io.
Fako efajoro miaraka amina pedal LJ-1675